မင်းမခြစ်လဲ နေဗါ ရဒယ်… မင်းမခြစ်လည်း နေဗါကွယ် Selection | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » မင်းမခြစ်လဲ နေဗါ ရဒယ်… မင်းမခြစ်လည်း နေဗါကွယ် Selection
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 3, 2015 in Opinions & Discussion | 17 comments
ဒီချုပ်က ၂၀၁၅ရွေးဂေါက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ် စာရင်းထုတ်ပြန်တော့ ပါမည်တစ်ပြေးသူ အတော်များများ ပြုတ်ကျန်ခဲ့သဗျ။ ဝေဖန်သံ ပွက်လောရိုက်တာ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ အဲဒီမှာ အန်အယ်လ်ဒီကို ထောက်ခံသယောင် သံယောင်လိုက်ပီး ကျောင်းသားသပိတ်ကို စော်ကားသူ ခိုနီလောင်းတျောက်လဲ တွေ့တယ်။ ထားပါတော့သူ့ဆိတ်နဲ့သူ foxပျံတာ ပြောဆရာမရှိ… ( စစ်တပ် သူဂေါင်းပြုခံရလို ကြိကြိတက်ချမ်းသာ ခိုနီဖြစ်သွားလဲ ကျောင်းသားတွေက မုဒိတာပွားမှာပါ..ဤဂါး စဂါးချပ်။။။ )
ရွေးခံရသူစာရင်း ကြည့်တဲ့အခါ ပါတီကိုသစ္စာခံမှု အစုန်းအဖျက် ဖြစ်သွားဘုံရ၏။ ဒီချုပ်မှာ အရည်အခြင်း ပြည့်မှီသူကလည်း မရှားပေဂိုးဗျ.. ပလို့ဂျိ။ ရှစ်ပူးအဖွဲ့က ကိုပြုံးချို တယောက်ပဲ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မိတယ်။ အများလိုလားတဲ့ ဒေါက်တာညိုညိုသင်း ကျန်ခဲ့တယ်။ ပါတီဝံ အခြင်းခြင်း ကျန်ရစ်တာ တကဏ္ဍ… အပြင်ကနေ ဝင်အရွေးခံသူများ ပါမလာတာတော့ ပါတီသဘောထားလို့ ပြောနိုင်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် အာဏှာရလာလျင် ကျင့်သုံးမည့် နိုင်ငံရေး မူဝါဒ၊ လှုပ်နည်းလှုပ်ဟန် မြင်နေရပြီ.. ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောလျင်ဒေါ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်.. မဟာဗျူ ဟာ နည်းဗျူ ဟာ ချဉ်းကပ်ပုံတွေပေါ့ဂျာ။။ ဒီချုပ်သည် ယနေ့အထိ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး စသဖြင့် အတိအကျဝေဖန်ပြောဆို ထုတ်ပြန်မှု မတွေ့ရ.. အားလုံး ဝေဝေဝါးဝါး။ ရှမ်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အတွင်းရေးမှူးစိုင်းညွှန့်လွင် အင်တာဗျူးတခုမှာ ဒီချုပ်ရဲ့ ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောသလဲဆိုရင် သူတို့သာ တကယ်ဖက်ဒရယ်မူစစ်ရင် ကျနော်တို့ သီးခြားပါတီထောင်ဆရာ မလိုဒဲ့။ မူဝါဒပိုင်း ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်… ဒီချုပ်ရဲ့ ရပ်တည်ချက် ပြတ်သားမှု မရှိဗုံကို မီးမောင်းထိုးပြတာ။ ဒါပေမှည့် ယခု နောက်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကတော့ဒီချုပ်ရဲ့လားရာ ပထမဆုံး တရားဝံ ချပြတဲ့ပွဲလို့ မြင်ရမှာပဲ…. ဒန် တန့် တန်။
နှာကစ်ခြေဥအရ ဗွားဒေါ် သမဒဖြစ်ဖို့ မရှိ.. သို့သော်ရွေးဂေါက်ပွဲ အခြေအနေ လွန်စွာကောင်းခဲ့လျင် စစ်တပ် ( လူကြားကောင်းအောင် ပြောတာပါ.. အလဂါး $ဆင့်မရှိတဲ့သူခိုးဓါးပြသာသာအကောင်တွေ.. သူတို့အဘသမ်းရွှေ ခိုင်းတာလှုပ်ရဒါ) မှ အပေးအယူလုပ်ဖွယ်ရှိသည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဖိအားတော့ပါရမှာပေါ့။ ခြေဥပြဌာန်းချက်အရ သမဒဖြစ်သူနဲ့ ပါတီ ရောထွေးမရမို့ ပါတီသစ္စာခံမည့်သူများ လွှတ်တော်တွင်း ရောက်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝံဆိုတာ ပြင်ပလူများရွေးလို့ရသည်လေ.. နောင်မှ မကြိုက်လည်း ဖြုတ်လို့ဖြု တ် တပ်လိုကတပ်… သိပ်ပြသနှာမရှိ။ သာဓကအားဖြင့် တိုင်းဧရာ လွှတ်တော်ငှက်ကထ ဦးဆန်းဆင့်ကို ဘပြောင် ဝံဂျီးယာဒူးပေး နှိပ်ကွပ်သလိုမျိုးပေါ့။ နဂိုက စွာစွာစွာစွာ ဖြစ်ပြီး ပါတီဝံ မဟုတ်တဲ့အခါ မူဝါဒပိုင်း အခြေအတင်ဖြစ်ဖို့ အတော်နီးစပ်၏။ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်… ဗွားဒေါ်ကိုယ်တိုင် ပါတီနိုင်ငံရေးပါလို့ ပြောပြီးသား..။ အပြင်လူ ပါတော့ လည်း ကျမတို့က ပါတီရေးထက် ညီညွှတ်ရေး ရှေးရှုတယ် ပြောလိပ်မဲ။
အချို့ကလည်း ပြန်ကျားရေးဝံဂျီး အူးရဲထွတ်လို ဖာတယ်… အစိုးမရအဖွဲ့အတွင်း လူလိုလို့ပါဒဲ့။ လွှတ်တော်တွင်း အကုန်ရောက်လျင် အစိုးရအဖွဲ့မှာ လူနည်းသွားမှာပေါ့ဒဲ့..။ ဒါဆို အပြင်လူများ ညဏ်တိမ်စွာနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းဝံဖို့ အန်အယ်လ်ဒီထဲ လျောက်လွှာတင်ခဲ့ကြသလား..။ ပြည်သူ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်ပြီး လွှတ်တော်မှနေ အစိုးမရအဖွဲ့တွင်း နေရာယူတာနဲ့ ဗွားဒေါ်က ဟဲ့ကောင်လာဆိုပြီး အပေးခံရတာ မတူရေးခြ မတူ။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ရှိသူ၊ သမားရိုးကျဘဝကနေ ဖောက်ထွက်ခြင်သူဆို ပြောပါတယ်။ ဆိတ်ထဲက မကြိုက်ပေမှဲ့ ဂေါင်းဆောင်နောက်လိုက်တတ်သူ အေးရာအေးကြောင်းသမား အတွက်တော့မထူးပေါ့။
အန်အယ်လ်ဒီ မရွေးတဲ့ လူထုလာဘ်ခံသူ ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ဒီမိုရဖို့အဓိကဆိုပြီး ရွေးဂေါက်ပွဲ စောင့်ကြည့်မလား။ ညွှန့်ပေါင်းဖွဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တသီးပုဂ္ဂလ ဝင်ပြိုင်ခြင်း စဉ်းစားစေခြင်တယ်။ ကာလအားဖြင့် ၃လ လိုသေးတယ်.. သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေလူထုရဲ့ တုံ့ပြန်မှု အားစမ်းလို့ရတယ်။ တလအလိုမှာ ယတိပြတ် စုန်းဖျက်နိုင်တယ်။ မဲပြန့်သွားမည် ဆိုလျင် နောက်ဆုတ်ခြင် နောက်ဆုတ်ပေး.. အန်အယ်လ်ဒီအတွက် မဲဆွယ်ပေးနိုင်တယ်။ အကျိုးရလာဘ်က စစ်တပ်လိုပဲ ဒီချုပ်အနေနဲ့ အနေအထားသိပြီး လိုက်လျောမှုအချို့ လုပ်လာနိုင်တယ်။ ယူအက်စ် နိုင်ငံရေးမျာ သမဒလောင်း ပါတီတွင်း ရွေးတဲ့အခါ နိုင်ဖို့အလားအလာ နည်းပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး မဲအရယူပြီး မိမိဘာကောင်ဆိုတာ ပြရတယ်။ အဲဒီအခါ ထိပ်မှ ပြေးနေသူက ဖျက်မြင်းဖြစ်လာမည့်သူနဲ့ စေ့စပ်ပြီး နေရာပေးတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် ရွေးဂေါက်ပွဲမှာ သမဒအိုဘားမားနဲ့ ဟယ်လာရီကလင်တန် ပါတီတွင်းပြိုင်တော့ ကလင်တန်ရှုံးပေမှည့် အင်အားပြနိုင်ဒဲ့အခါ နိုင်ငံခြားရေးဝံဂျီး ရတယ်။ အကယ်၍မြှား ဒုတိယသမဒ ဖြစ်ခြင်တယ်ဆိုလည်း ဖြစ်မှာပဲ။
ပထမသက်တမ်းသာ ခံမည့် အာဏှာရ အစိုးမရ အဖွဲ့မျိုး အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အိန္ဒိယမှာ အင်ဒီယာဂန္ဓီသေပြီးနောက် တက်လာတဲ့ သူ့သား ရာဂျစ်ဂန္ဓီရဲ့ ကွန်ဂရက်အိုင်ပါတီလိုမျိုးပေါ့။ ရှစ်ပူးများ ရွေးဂေါက်ပွဲ အတွေ့အကြုံယူပါ၊ လူထုနဲ့ ပိုနည်းစပ်မည်။ အသက်အားဖြင့်လည်း နောက်မကျသေး..။ ကံကောင်းလျင် လွှတ်တော်တွင်း ၊ အစိုးမရအဖွဲ့အတွင်း မျက်နှာမော့ ဝင်နိုင်သည်။ ဘယ်ခွေးမှ လူထင်ဆရာမလို…
ရှစ်ပူးအဖွဲ့ အူးဆောင်ပြီး လူထုနဲ့နီးစပ်သူများ ညွှန်ပေါင်းဖွဲ့စေခြင်သည်၊ အင်အားပြစေခြင်သည်။ တခုတော့ ရှိတယ်… ကိုယ့်လူကိုယ် ထိန်းနိုင်ရမည်၊ စည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်ရမည်။ မိမိသဘောနှင့် လှုပ်ခွင့်မရှိ… အဲဒီလိုကြတော့ လည်း ဒီချုပ်နဲ့ သူမသာ ကိုယ်အသုဘ ဖြစ်သွားရော.. ဒါပဲလေ နိုင်ငံရေးဆိုတာ။ အာဏှာကို ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ လိုခြင်တဲ့ အတိုက်အခံဆိုပီး ဖင်ပိတ်အော်သူ စစ်ဘောမ၊ စစ်လမ်းနီးတွေလည်း ဖွတ်သမဒနဲ့ ဖွတ်အုတ်ကထ ကွဲလည်းကွဲရော $သံပိတ်ကုန်ရော မဟုတ်လား။
အန်အယ်ယ်ဒီ မောင်ပိုင်စီးမှာ ကြောက်နေတဲ့ ဖွတ်အတွက်လည်း ဂွင်ပဲ။ အဆင်းမှာ ဘီးတပ်ပေးပါ။ ဖွတ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ရွေးဂေါက်ပွဲ ကော်မရှင်အုတ်ကထ အူးတင်အေး လုပ်ပိုင်ခွင့်သုံးပီး ကူညီနိုင်တယ်။ ရေကြီးတာ အကြောင်းပြပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မှတ်ပုံတင်ရေး နောက်ဆုံးနေ့ကို နှစ်ပတ်လောက် ရက်ရွှေ့ပေးလိုက်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မှတ်ပုံတင်ကြေးပါလျှော့… ။ နို့မို့လျင် နင်တို့ဖွတ်မျိုး ပြုတ်တော့ မှာ..။
မဟုတ်မခံ မှန်ရာပြောဓါတ်တဲ့ ရဲရဲတောက် ဒီမိုကြောင်ကြီး…. ငါကွ
အများလိုလားသူတိုင်းလည်း ရွေးသင့်သူ မဟုတ်နိုင်ဘူး။
ဒီဗွီဘီက အင်တာဗျူးတစ်ခုကို နားထောင်ပြီး အရင်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့သူကို မထောက်ခံချင်တော့ဘူး။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ထည့်မရွေးတာကိုတောင် ထောက်ခံမိတယ်။
အခုအချိန်ထိတော့ ယောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက်ပဲ့ပြားပင်တွေ နဲ့ ကိုင်းပင်တွေ ရောနေအုံးမှာပါဘဲ
ရွှေးကောက်ပွဲပြီးရင် တော့ တိတိကျကျ သိလာမှာ အမှန်ပါဘဲ
ပူမနေနဲ့ ကြောင်ကြောင် မသိဘူးလား။
ဖွတ်တို့ က မှတ်ပုံတင်ကြေး အလကား ဟဲ့။
. ဒေါ်ညိုညိုသင်း မပါတော့ စိတ်မကောင်း။
သို့ပေမဲ့ ကိုယ်လဲ ဇာတ်လမ်းစုံ မသိဘဲ နဲ့ တော့ ဘေး ကနေ ရမ်းတီးပြီး မဝေဖန်လိုပါ။
အကြောင်းစုံ သိမှ ဝေဖန်ရေး လေကန်ရေး လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။
မဟုတ် ရင် နီ လို ပြောသမျှ တလွဲ ချည်း ဖြစ်နေလိမ့်မဲ။
၂၀၁၀တုံးကလည်း.. ဟိုလိုလို.. ဒီလိုလို.. ဒီ့လိုလို.. ဒီဒါလိုလို.. ကွီကွာလိုလို..
ဗုတ်နိုး..နိုးဗုတ်.. ဗိုးနှုတ်… ဂျိုးရုတ်.. စစ်အစိုးမရကို.. ငါမယုံ..။ ငါ့ကိုစစ်အစိုးမရမယုံ..
.. ဒီချုပ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမလား..မ၀င်ရမလား..။ ၀င်သလိုလိုတန်းလန်းကြီးနေရမလား..
မဲထွက်ပေးရမလား.. မဲပေးသလိုလို..မပေးသလိုလိုလုပ်ရမလားမသိ.. ဖြစ်ခဲ့..
ဒီလိုနဲ့.. ဒီချုပ်ကွဲပြဲ..။ မဲတွေအကုန်.. ကြဖွံ့ဆီရောက်.. လူထု.. ၅နှစ်ခံလိုက်ရဖူးပြီ..။
Respect the Power of her Words.
I salute you Kyi Phyu Shin.
From : Kyi Phyu Shin’s FB Wall
အခုချိန်ဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ အတွက်သိပ်ကိုအရေးကြီး တဲ့အချိန်ပါ၊
ကျွန်မပြောချင်တာက NLD အမတ်လောင်းတွေထဲမှာ ကိုယ်ပါစေချင်တဲ့သူတွေမပါ
သလို၊ကိုယ်မပါစေချင်တဲ့သူမျိုး တွေပါနေတာမျိုး နေရာတိုင်းမှာဂယက်ရိုက်နေပါတယ်. . . .။
ကျွန်မသတိပေးချင်တာက အခုချိန်ဟာ ပန်းတိုင်မဟုတ်သေးပါဘူး၊တိုက်ပွဲတောင်မဝင်ရသေးတဲ့
ကာလ၊တပ်သားစုဆောင်းတဲ့ကာလပါ. . . .
အမတ်လောင်းတွေဆိုတာ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ ကိုသွားရမယ့် တိုက်စစ်မှူးတွေပါ. . . .
တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ ရှေ့တန်းကိုသွားရမယ့်သူရှိသလို နောက်တန်းမှာလည်း လူတော်တွေချန်နေခဲ့ရအုံးမှာပါ။
ပြီးတော့ကျွန်မ ထပ်ပြီးသတိပေးချင်တာက လွှတ်တော် သက်တမ်းဟာ (၅)နှစ် ပါ။
ဒီ(၅)နှစ်ထဲနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးဟာ မပြီးသွားပါဘူး၊
အခု လွှတ်တော်ထဲဝင်မယ့်သူတွေဟာ ကားစုတ်ကြီးပြင်ပြီးခရီးစထွက်ရမယ့် သူတွေပါ။
ကားစုတ်ကြီးနဲ့ ခရီးလမ်းခပ်ကြမ်းကြမ်းကို မောင်းရမယ့်ကာလပေါ့။
ဒီအခါ ကားစုတ်ကြီး ရပ်သွားတိုင်း ကျွန်မတို့ လိုနောက်တန်းကလူတွေက ဝိုင်းတွန်းပေးနေရ
အုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပြီး ကားစုတ်
ကျွန်မတစ်ခုယုံကြည်တာက အမေစု ဟာNLD အမတ်တွေကို လာဘ်စားခွင့် ပေးမှာမဟုတ်သလို
တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေကိုလည်း အလွဲသုံးစား လုပ်ခွင့် မပေးပါဘူး၊
ဒ့ါအပြင်သူမ လုပ်ချင်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကိုလည်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်
မှာပါ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ကူညီမှူတွေကို လည်းအလေအလွင့်မရှိအောင်ဂရုစိုက်ပြီး ပြည်သူ
တွေဘဝလှပအောင် မိခင်တစ်ယောက်လို စောင့်ရှောက်ပေးမှာပါ။
ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာ ကျွန်မတို့အား လုံးရဲ့လက်ထဲမှာပါ။ ခုချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အားလုံး
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကောင်းကို မဖန်တီးနိုင်တဲ့သမိုင်းတရားခံတွေမဖြစ်ဖို့သိပ်ကို အရေးကြီး
ကျွန်မနောက်ဆုံးပြောချင်တာက “အမတ်”ဆိုတာ ပြည်သူတွေခိုင်းသမျှလုပ်ပေးရမယ့်သူတွေပါ
ပြည်သူခိုင်းတာခံရမယ့်သူတွေပါ။အခိုင်းခံချင်လို့ အမတ်လုပ်သူများကို ကိုယ့်မြို့နယ် ကိုယ့်ဒေသ
ကောင်းဖို့ အားရပါးရခိုင်းကြပါ။တန်အောင်ခိုင်းကြ ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကတော့(၁၁) လ ပိုင်း( ၈ )ရက်နေ့ အပြီး ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေခိုင်းတာလုပ်ပေးဖို့ ရောက်ရှိ
လာမယ့် အမတ်များအားလုံးကို အားရပါးရခိုင်းရန် အသင့်စောင့်နေပါကြောင်း. . . .
အမတ်များကိုအားရပါးရခိုင်းရန်စောင့်နေတဲ့. . . .
မှန်လိုက်လေ အရီး ရေ (အဲ) မကြည်ဖြူရှင်ရေ။
ကိုယ် မကြိုက်တဲ့သူပါလာတာနဲ့ စု ကို ဆဲကြရောလားးး??????
တစ်သီးပုဒ်ဂလ မကလို ၂ သီးဖြစ် ခွဲထွက် ထွက်။
အလကား ဆေးမြီးတို နိုင်ငံရေးသမား တွေ။
ဟိုလူ အထုတ်ထမ်းပြ ဟိုလူ သမဒ ဖြစ်စေချင်။
ဒီလူက ဘာလုပ်ပြ ဒီလူ ကို ဝိုင်းရံချင်။
အရည်အသွေးသိလို ဝိုင်းရံတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဂုန်နောက်လိုက်တဲ့ ဂုန် ဆာ နိုင်ငံရေးသမားတွေမှန်းသိပြီ။
သန်မတ တို့ ဝံကြီးတို့အတွက်
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ၀န်ကြီးခုံ ၃၀ကျော်မှာ.. ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေယူသုံးမယ်ဆိုရင်.. လွှတ်တော်ခုံ ၃၀ကျော်လျှော့မယ်..။
ဒါဆို.. ဒီချုပ်က..လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. ဘယ်လောက်မဲနိုင်ထားတယ်မသိပေမယ့်.. သူ့ရဲ့.. လွှတ်တော်တွင်းမဂျော်ရတီ(လူများ) စုဖြစ်နေတာကိုသွားထိခိုက်(နိုင်)မယ်..။
မတော်.. ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. ၆၈%လောက်ပဲနိုင်ထားတာဆိုရင်.. လူ၃၀ကျော်ထွက်တာဟာ.. မဂျော်ရတီကနေ.. မိုင်နရတီအထိဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ..။
ဒီချုပ်ရဲ့.. အမတ်ဟာ.. ပြည်ခိုင်ဖြိုး+တမတ်သားအမတ် ထက်နည်းသွားနိုင်တာပဲ..။
ဒါဆို.. ဥပဒေပြုရာတွေမှာ.. အတိုက်အခံပြည်ခိုင်ဖြိုးအပေါ်ပြန်မှီခိုနေရမယ့်သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့…။
ယူအက်စ်မှာကျ.. ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်သက်တန်းကို.. ၂နှစ်ပဲပေးသမို့.. ၂နှစ်တခါတော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရှိကို..ရှိ..။
ဖွဘုတ်မှာ ရယ်စရာတွေဖတ်ရတယ်… ဟီ ဟိ ကြံဖန် ဟာသပြောတဲ့သူတွေ…
နာမည်ကြီးပြီး စာရင်းမပါသူတွေကို ရွေးကောက်ခံစရာမလိုတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ နေရာပေးမလို့ဆိုပဲ…
ဟဲ ဟဲ… ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေက နာမည်ကျော် ထောင်ထွက် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ၊ ပညာရှင်မဟုတ်…
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဥပဒေပြုဖို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စား အရေးဆိုဖို့ကလွဲရင် အုပ်ချုပ်မှုတောင်တတ်မှာမဟုတ်…
သူတို့ကို ဝန်ကြီးဋ္ဌာနပေးကိုင်ရင် အစိုးရအဖွဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှန်းကြည့်ပေါ့…
ဖာထေးတာလည်း… ကြည့်ကောင်းအောင် ဇာတ်ကွက်ဆင်ကြပါဦး…
တန်ဘိုးရှိတဲ့ မဲတစ်ပြားကို အလဟသမဖြစ်စေချင်လို့ အမုန်းခံနေတာ
ကျွန်မ ကတော့ ဘယ်ပါတီ ကိုမှ အစွဲ မရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဖွတ်ပါတီ ကိုတော့ ဖြုတ်ချင်တယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ ရဲ့ အတိုက်အခံ ကို အားပေးရမှာဘဲ။
အတိုက်အခံ မို့ အားပေး တယ် ဆိုတာထက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့် မို့ အားပေး တယ် တာ အမှန်ဘဲ။
သူ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြား သူ ဆို ကျွန်မ အယုံအကြည် ရှိမယ် မထင်ဘူး။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိရင် ကျွန်မ လဲ နိုင်ငံအရေး ကို မသိဟန်ဆောင်နေသူဖြစ်နေနိုင်တယ်။
အခုတောင် ပါတီထဲ မှာ လူ တွေ ရဲ့ လက်ရှိအစိုးရ ကို ဖြုတ်ချင်ရခြင်း ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကို မေးလိုက်ချင်တယ်။
တစ်ချို့ က နင်းပြားလူထု ကို ကယ်ချင်လို့ ထက် စစ်အစိုးရ ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တစ်ဖက်သပ် မုန်းနေတာ လို့ သူတို့ ကို ဆန့်ကျင်ရအောင် ဒီချုပ် ထဲ ဝင်နေသလားဘဲ။
သူတို့ ယုံကြည်ချက် က စစ်မှန် တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အတွက်မဟုတ်ဘူး။
လူ တွေကို အညိုး အမုန်း နဲ့ တိုက်ချင်နေတာ တွေ ရှိနေရင် ခက်မယ်။
ကျွန်မ က လက်ရှိအစိုးရ ကို ဖယ်လိုတာ က စနစ်ပြောင်းချင်လို့။
လက်ရှိလူတွေ က သူတို့ အာဏာရှင်စနစ် ကို ဖက်တွယ်ထားလွန်းလို့။
ဥပဒေမဲ့ ဘဏ္ဍာသူခိုး တွေ လုပ်နေတာမို့။
သူတို့ လုပ်ချင်သလို ဖြစ် အောင် မတရားမှု တွေ ကို ရှေ့တန်းတင်ထားလို့။
ဒီတော့ ကျွန်မ ကတော့ စနစ်ပြောင်း ဖို့ ဆို ဘယ်နည်း နဲ့ ပြောင်းပြောင်းလက်ခံတယ်။
.ပြသနာ က အဘ တို့တွေ က အစ်မဒုံ အော်ပေးသလို ရပ်နိုင်ပေ့ ကို နားမထောင်ဘဲ ထိုင်ချ နေကြတော့ မယုံတော့ဘူး။
သူတို့ ကြည့်ရတာလဲ ဒီ တစ်သက် အမြင်မှန်၊ အသိမှန် ရမဲ့ ပုံတော့ မရှိ။
ဒါကြောင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ က တော်ပြီး ဒီချုပ် က လူ ညံ့ နေရင် တော် တဲ့ လူကိုဘဲ ရွေးချင်တာဘဲ။
ဖွတ် ဘက်က လူ ကတော့ ဘယ်သူ လာလာ စိတ်ဓာတ်အင်အား အနေနဲ့ ဆို ကိုယ့်လောက်တောင် ပြည်သူအပေါ်ကို စေတနာ ရှိ မှာ မဟုတ် လို့ ယူဆထားပြီး မို့ ပြတ်တယ်။
ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သိစေချင်လိုက်တာ။
ဒီချုပ်က လူမို့ မကြိုက်လဲ အောင့်ပြီး မဲ ပေးရတာ မျိုး ပြည်သူကို မလုပ်စေခိုင်းပါ နဲ့ လို့။
ဒီချုပ် ကို မဲ ပေးစေချင်ရင် နယ်ခံ တွေ က နေ ယုံကြည်စိတ် လေးစားစိတ် အားကိုးစိတ် ရှိ သူ၊ နယ်ခံ တွေ ကို လေးစားသူ ဘဲ ဖြစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
တကယ်ဘဲ နယ်ခံ နဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တကယ် သဟဇာတ ဖြစ်မဖြစ် တော့ စီစစ် သင့်ပါသေးတယ်။
မဟုတ်ဘဲ နဲ့ တော့ ၁၀၀% ဆိုတာ ကို မှန်းလို့မရပါ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့် ထည့် ရတဲ့ မဲ ဆိုတာ မျိုး တော့ မရချင်ပါနဲ့။
မဲ ထည့်ရမဲ့ ပြည်သူတွေကို လေးစားသင့်ပါတယ်။
. ပြောသာ ပြောရ။ အတွင်း ထဲ စိတ်ထား နိမ့် သူ တွေ၊ တစ်ဇွတ်ထိုး ငါစွဲ တွေ များ နေရင်တော့ ထိန်းဖို့ ခက် မှာ လဲ တွေးမိပါတယ်။
ဟို က တစ်မျိုး ဒီ က တစ်ဖုံ တို့ ရွှေမြန်မာ များ ရဲ့ အကျင့် ကိုလဲ သိနေတော့ ခက်သား။
သူမို့သာ ဇွဲကောင်း လှတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာ လှတယ်။
တကယ်ဘဲ ချီးကျူးဖို့ တော့ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လဲ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ NLD ကို သာ မဲ ပေးကြပါတော့။
လက်ရှိ စနစ် ကို ပြောင်းနိုင်ဖို့ရာ …. မှတစ်ပါး အခြားမရှိ။
” တစ်သီးပုဂ္ဂလ က တော်ပြီး ဒီချုပ် က လူ ညံ့ နေရင် တော် တဲ့ လူကိုဘဲ ရွေးချင်တာဘဲ ”
” ဒီချုပ်က လူမို့ မကြိုက်လဲ အောင့်ပြီး မဲ ပေးရတာ မျိုး ပြည်သူကို မလုပ်စေခိုင်းပါ နဲ့”
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့် ထည့် ရတဲ့ မဲ ဆိုတာ မျိုး တော့ မရချင်ပါနဲ့”
အဲဒါကြောင့် အချိန်မနှောင်းခင် ဘွားတော်ကို လူပြန်စစ်ပြီး …
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကို ပြင်ဆင်စေချင်တာပဲ …
ဒေါက်တာမျိုးရန်နောင်သိမ်းလည်း အိတ်ဖွင့်စာရေးပြီးပြီ …
ဆွမ်းဆန်ထဲက ကြွက်ချေး ၊ စုန်းပြူးတွေကိုဖယ်နိုင်မှ မဲမပြန့်မှာ …
. ပြောလက်စ နဲ့ မဆိုင်တာ သတိပေး ဦးမယ်။
ဝိန်းရူနီ ရဲ့ Pray for Myanmar ဆိုတဲ့ စာတန်း ကိုင်ထား တဲ့ ပုံ တွေ့ ရင် မယုံ ကြ နဲ့ ဦး။
Ethics မရှိတဲ့ သူတွေ ၊ အင်တာနက် ကို အလွဲသုံးစား abuse လုပ် တဲ့ သူတွေ ထဲ မလဲ မြန်မာတွေ ထိပ်တန်း ရောက်နေလားမသိ။
အခုဆို FB သတင်း တွေ ပုံ တွေ ကို ရဲရဲ မယုံ ရဲ သလောက်ဘဲ။
စုမှ စုပဲ ဒါပဲ။
.ကြောင်ကြောင့်အသားကို နွှင်ပြီး ကြော်ဆားမဲ